3 Ahụhụ ga-adịrị obodo na-awụfu ọbara.+ O jupụtara nnọọ n’aghụghọ na ịpụnara mmadụ ihe. Anụ oriri ya adịghị agwụ agwụ!
2 A na-anụ ụda ụtarị+ na mkpọtụ ụkwụ ụgbọ ịnyịnya na-eme, e nwekwara ịnyịnya na-awụ ọsọ na ụgbọ+ ya na-amali amali.
3 E nwere onye na-agba ịnyịnya nke nọ n’elu ịnyịnya na ire ọkụ nke mma agha na ube+ nke na-egbu àmụ̀mà na ìgwè ndị e gburu egbu na ozu jupụtara ebe niile; ozu ndị mmadụ a na-apụghịkwa ịgụta ọnụ. Ha na-akpọ ụkwụ n’ozu ndị ha nwụrụ anwụ wee daa.
4 Nke a bụ n’ihi ajọ iko nke nwaanyị akwụna+ na-akwa, nwaanyị mara ezigbo mma nke na-agba afa, onye ji akwụna ọ na-agba na-amata mba dị iche iche n’ọnyà, jirikwa ịgba afa+ ya na-amata ezinụlọ dị iche iche n’ọnyà.
5 “Lee! Ana m emegide gị,”+ ka Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru, “m ga-ekpoli uwe mwụda gị wụchie gị ihu, m ga-eme ka mba dị iche iche hụ ọtọ+ gị, meekwa ka alaeze dị iche iche hụ ihe ihere gị.
6 M ga-ekpokwasị gị+ ihe rụrụ arụ, m ga-emekwa ka ị bụrụ ihe a na-asọ oyi; m ga-emekwa ka ị bụrụ ihe nkiri.+
7 Ọ ga-erukwa na onye ọ bụla hụrụ gị ga-agbara gị ọsọ,+ ọ ga-asịkwa, ‘E bibiwo Ninive! Ònye ga-emetara ya ebere?’ Ebee ka m ga-achọta ndị ga-akasi gị obi?
8 Ị̀ ka No-emọn,+ nke dị n’akụkụ ọwa mmiri+ niile nke Naịl, mma? Mmiri gbara ya gburugburu, oké osimiri bụ akụ̀ ya, oké osimiri bụkwa mgbidi ya.
9 Ike ya dum bụ Itiopia, tinyere Ijipt;+ ike ya enweghịkwa njedebe. Pọt na ndị Libia nyekwaara gị+ aka.
10 A ga-adọrọ ya onwe ya n’agha; e wee dọrọ ya n’agha.+ A kụriri+ ụmụ ya na ngalaba okporo ámá niile; ha fekwara nza+ n’isi ndị ya a na-asọpụrụ, a tụwokwa ndị ukwu ya niile ịgà.+
11 “Gị onwe gị ga-aṅụbigakwa mmanya+ ókè; ị ga-aghọ ihe zoro ezo.+ Gị onwe gị kwa ga-achọ ebe e wusiri ike iji gbanahụ onye iro.+
12 Ebe gị niile e wusiri ike dị ka osisi fig ndị mkpụrụ mbụ ha chaworo acha, ndị ọ ga-abụ, ọ bụrụ na a kwaa ha aka, mkpụrụ ha adanye n’ọnụ onye ga-aracha+ ha.
13 “Lee! Ndị gị bụ ụmụ nwaanyị+ n’etiti gị. A ghaghị imeghere ndị iro gị ọnụ ụzọ ámá ala gị. Ọkụ ga-erepịa ihe ntụchi ibo+ ụzọ gị.
14 Sepụtara onwe gị mmiri+ n’ihi nnọchibido a ga-anọchibido gị. Mee ka ebe gị e wusiri ike sikwuo ike.+ Banye n’apịtị, zọọkwa ájá; buru ihe e ji akpụ brik.
15 Ọkụ ga-erepịa gị ọbụna n’ebe ahụ. Mma agha ga-ebipụ+ gị. Ọ ga-erepịa gị dị ka ụmụ igurube+ si eripịa ihe. Mee ka ọnụ ọgụgụ gị baa ụba dị ka ụmụ igurube; mee ka ọnụ ọgụgụ gị baa ụba dị ka igurube.
16 I mewo ka ndị ahịa gị mụbaa karịa kpakpando nke eluigwe.+
“Ma ụmụ igurube ahụ na-ewe iwere; ha ewee fepụ.
17 Ndị nche gị dị ka igurube, ndị gị bụ́ ndị na-ewe ndị na-eje agha n’ọrụ dị ka ìgwè igurube. N’ụbọchị oyi, ha na-anọ n’ogige e ji nkume gbaa. Anyanwụ chawa, ha agbalaga; a gaghịkwa ama ebe ha gbagara.+
18 “Ndị ọzụzụ atụrụ gị na-ero ụra,+ gị eze Asiria; ndị ukwu gị nọ n’ebe obibi+ ha. A chụsasịwo+ ndị gị n’ugwu, ọ dịghịkwa onye na-achịkọta ha.
19 Oké ọdachi nke dakwasịrị gị enweghị ngwọta.+ Ọnyá ụtarị a pịara gị adịghị ala ala. Ndị niile nụrụ akụkọ banyere ihe mere gị ga-akụ aka;+ n’ihi na ọ̀ bụ onye ka ihe ọjọọ gị na-anọgideghị na-adakwasị?”+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D34%26Chapter%3D3%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl